Global Aawaj | के हो पोष्ट कोभिड ? के हो पोष्ट कोभिड ?
के हो पोष्ट कोभिड ?
५ असार २०७८ 6:57 am
बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बिरामीहरुको संख्या बिस्तारै ओरालो लाग्दै गर्दा पोष्ट कोभिडका बिरामीहरु भने बिस्तारै बढ्न थालेका छन् । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरको कोभिडका संक्रमित बढी देखिए । दोस्रो लहरको कोभिडको लक्षण पहिलो भन्दा घातक पनि देखियो । मृत्यु हुने तथा गम्भीर हुने बिरामीको संख्या पनि बढी देखियो ।